दोस्रो सेमिफाइनलमा आज थ्रीस्टार र संकटा भिड्दै – Khel Dainik
दोस्रो सेमिफाइनलमा आज थ्रीस्टार र संकटा भिड्दै
बिराटनगर (खेलदैनिक) । प्रतिष्ठित विराट गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज सिएमजी संकटा क्लब र रुस्लान थ्रीस्टार क्लब भिड्दै छन् ।
बिराटनगरस्थित शहिद मैदानमा आज बेलुका ६२० बजेदेखि शुरु हुन गईरहेको आजको सेमिफाइनल खेल पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । सेमिफाइनल यात्रा पक्का गर्ने क्रममा संकटाले सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबलाई हराएको थियो ।
उता लगातार तेस्रो उपाधि जित्ने अभियानमा रहेको थ्रीस्टारले भने क्वाटरफाइनलमा चिरप्रतिद्वन्द्वी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलाई हराएको थियो । आज जित्ने टोलीले आर्मीसँगको फाइनल भेट सुनिश्चित गर्नेछ । आर्मी यसअघि नै फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
कति होला आजको फाइनल नतिजा ? को पुग्ला त फाइनलमा ? अनुमान लगाउनुहोस् ।
← पोखरामा दोश्रो एलजी कप फुटबल सुरु मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतसँग नेपाल पराजित →